Hoggaamiyaasha dunida oo third class iyo fourth class ah intooda badani | Cadceed newssite
Hoggaamiyaasha dunida oo third class iyo fourth class ah intooda badani
Maanta hoggaamiyaasha dunida ka taliya intooda badani maaha siyaasiyiin garaad ama aqoon siyaasadeed leh oo indheer garad siyaasadeed leh , laakiin intooda badani waxay buuxiyaan kursiga madhan .
Waxaa maanta loo dareerayaa dalka UK doorasho deg deg ku timi , markii ay codsatey Ra iisal wasaaraha vdalka UK , ee markabkii Captai_ka ka noqotay , markii uu Ra iisal wasaarihii la doortay iscasilay , markii ay dadka reer UK u codeeyeeen in ay ururka Europe iskaga baxaan ee ay sidaas u codeeyeen .
T. May waxay markabka talada dalka kula wareegtey markabkii oo badda dhex maraaaya , isaga oo aanay caddayn dekedda uu ku socdo iyo dekedda uu si nabad gelyo ah ugu xidhan doono .
Ka dibna waxay istustey in uu xisbiga Labour_ku aad u jilicsan yahay iminka oo haddii ay doorasho iminka ku dhawaaqdo ay heli karto , oo ay sidaas ku noqon karto , Ra iisal wasaare la doortey oo ay si kalsooni ah ula gorgor tami karto dalalka Europe ee wada hadalka badani u wada hadhay , laakiin wax yaabo badan iyo dhacdooyin kala duwan oo is daba joog ah ayaa dhacay . sidii qaraxyadii dalka todobaadkii hore ka dhacay iyo siyaasad xumo ay T.May ay doonayso in ay meel mariso iyo nabad-gelyadii oo aanay waxba ka qaban , iyada oo uu qarax qore bishii hore ka dhacau magaalada Manchester oo dad badani ku dhinteen.
Laakiin si kasta ha ahaato , ee doorashadan waxa ku guulaysanaaya xisbiga wata barnaamij siyaasadeed oo ku wajahan nabad-gelyada iyo wax qabadka bulshada iyo adeega bulshada iyo caafimaadka iyo wax barashada , intaas oo dhan oo uu xisbiga Conservative _ ku uu ka aradan yahay .
Hadaba xisaabtii ay ku tashatey T. May iminka way isla rogi kartaa , oo xisbigaqa Conservative_ku doorashada sidaas ayuu ku waayi karaa .
Dhibaatada weyn ee jirtaana waxa weeye , in aan cidina iminka siyaasadda saadaalin karayn , oo waxaa dunida ka dhacay in ay yimaadeen oo ay xilalkii la wareegeen qaar aan weligeed cidina ku tashan in la dooran karo ama ay dalal hoggaamin karaan , sida Donald Trunp oo kale oo subaxdiina wax ku hadla , fiidkiina wixii uu saaka yidhi bedela oo wax ka duwan yidhaahda ,
Wixii uu caawa ku hadlayna berito subax ama saqda dhexe wax kale oo ka duwan ku hadla , ilaa iminka ay dawladdii maraykanku qaadday jaah wareer oo ay tidhi ( ninkanu ma metelo siyaasadda dalka lagu maamulo , shaqona kuma laha ) iminka waxay maraysaa in laga qariyo sirtii dalka ,
Dalka France_na waxa xukunkii la wareegey oo la doortey xisbi aan hore talada dalka u qaban oo aan ka mid ahayn labadii xisbi ee loo bartey , lamana garanaayo halka iyo siyaasadda uu dalka u hoggaamin doono .
Dalka UK waxa hortaalla dhibaatooyin fara badan oo soo bixi doona , marka uu Honeymoon_ ka siyaaasadeed iyo doorashasdu ay dhamaato .
Dhibaatooyin weli la qarinaayo oo dhaqaale iyo siyaasadeed iyo asqo aanay garanayn meel ay wax ka qabtaanama meel ay dalka u hoggaamiyaan ama meel uu dalku ku socdo . , sababtoo ah , ka bixitaankii dalka UK uu ka baxay ururkii Europe waxay sababtey in dalka uu go doon noqdo , oo uu dib nolol cusub u bilaabi doono , isaga oo aan isku filayn keligii , qorshena uga degsanayn
Hadaba ilaa sanadka danbe waxa la filayaa ilaa April in ay dalka UK soo waajihi doonto dhaqaale xumo iyo shaqo la aan badani , iyada oo ay dhibaatooyinkaasi ay socon doonaan muddo aan yarayn , ilaa iyo inta uu dalku waddo cad oo siyaasadeed oo dhaqaale oo qorshe uu heli doono , ama uu abuuri doono .
Laakiin waxa cad in ay dunida maanta hoggaaminayaan dad aan siyaasadda aqoon u lahayn oo garaad siyaasadeed lahayn oo aan indheer garad siyaasadeed ahayn .
Maanta waxaad arkaysaa dalkii Saudiga oo hogaaminaaya siyaasaddii bariga dhexe ( Carabta ) iyo caalamka Islaamka oo dalkii Masar iyo Iraq iyo Syria aan cidina waxba waydiinayn . hadda waa Saudi_ga oo aan boqolkiiba 55 dadkiisa waxba akhriyin , waxna qorin .
Markaa siyaasiyiinta Somaliland_na maxaad ula yaabi doontaa , bal adiguba miisanka saar oo qiimee siyaasiyiinta ku tartameysa jagada madaxweyne ee dalka Somaliland .
Ma yihhin qaar u qalma dalka iyo dadka ay doonayaan in ay hogaamiyaan ?
Ma ku jiraa :
Mid lehi saddexdooda murashax , barmnaamij siyaasadeed oo dhaqaale oo qorshe wataa
hadda su aashaa ka feker adiga oo aan caadifad qabyaalad ahi ku qaadin .
Hadaba maanta dunida waxa hoggaan u wada ah oo ka taliya siyaasiyiin jagada buuxiya , oo third class iyo fourth class ah oo aan aqoon siyaasadda u lahayn iyo hoggaanka toona .
Hadaba siyaasadda iyo siyaasiyiinta dunida oo dhan inteeda badani asqo iyo jaahwareer siyaasadeed ayey ka siman yihiin .